Madaxweyne Xasan: Alshabaab Waa Laga Guuleystay Laakiin Weli Ma Aysan Dhiman – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Madaxweyne Xasan: Alshabaab Waa Laga Guuleystay Laakiin Weli Ma Aysan Dhiman * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By MAREEG on 27th October 2013
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud oo shalay kulan Muqdisho kula yeeshay Ku xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey Jan Eliasson ayaa sheegay in taageerada Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika keeneen in Soomaaliya gaaarto horumar, islamarkaana Alshabaab looga adkaado goobo badan.
Madaxweynaha iyo ku xigeenka Xoghayaha Guud ee QM ayaa waxey ka wada hadleen kaalmada iyo wada shaqeynta Qaramada Midoobey ay u fidiso Soomaaliya, horumarka ballaaran ee ka jira Soomaaliya iyo caqabadaha jira.
Sidoo kale waxey ka wada hadleen shirka Golaha Ammaanka ee QM oo dhowaan dhacaya loogana hadlayo sidii caalamku u taageeri lahaa Ciidanka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM.
Madaxweynaha iyo Ku xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey ayaa si wadajir ah u qabtay shir jaraa’id, waxaana madaxweyne Xasan sheegay in Alshabaab laga adkaaday laakin weli ay noolyihiin.
Madaxweynaha ayaa yiri “Al-shabaab waa laga guuleystay, laakin weli ma aysan dhiman, Golaha Ammaanka ee QM waa inay caawinaan sidii ciidanka Soomaalida iyo kuwa AMISOM u heli lahaayeen tasiilaadkii lagu dhameystiri lahaa shaqada oo Al-Shabaab dalka looga sifeyn lahaa. Mustaqbalka Soomaaliya iyo xasilinta dalkaba waxey ku xiran yihiin sidii loo heli lahaa ciidan Soomaaliyeed oo tababaran isla markaana heysta dhaqaalihii ay ku howlgali lahaayeen.”
“Xiriirkeena annaga iyo QM waa mid mudo soo jireen ahaa oo waqtiyo fiican iyo waqtiyo murugo lehba aan isla soo marnay. Waxaana soo dhoweyneynaa taageerada iyo isgarab istaaga QM oo ay taageerayaan qorsheyaasheena amniga, dib u dhiska dalka iyo xasilinta dalka” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
“Kaalmadii QM, Midowga Afrika iyo caalamkaba waxaa noogu suurto gashay inaan horumar baaxad leh sameyno sanadkii la soo dhaafay. Caalamkuna wey arkaan horumarkaas aan sameyney, laakin weli waddo dheer baa na wada sugeysa si aan dalka ugu soo dabaalno amni, kala danbeyn iyo horumar dhan walba ah. Waxaan ka shaqeyneynaa Soomaaliya oo nabad ah oo si nabad ah ula shaqeyneysa waddamada deriska ah iyo caalamkaba, oo shacabku ay nolol maalmeedkooda si nabad ah ugu shaqeysanayaan oo ay kalsooni iyo sharaf ku jirto” ayuu sidoo kale yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambeysntii xusay inuu aad ugu faraxsan yahay in Qaramada Midoobay jooto Soomaaliya “Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in QM ay nala joogana oo ay nagala shaqeynayaan waddadaas iyada ah” ayuu yiri Madaxweynahu.
“Qaramada Midoobey waxey na tuseen sida ay noo taageersanyihiin oo ay weliba xafiis hor leh oo cusub ay ka furanayaan Muqdisho. Wadashaqeyn rasmi ah oo na dhexmarta Qaramada Midoobey waa muhiim oo noo sahleysa inaan sida wada jir ah u wada shaqeyno, tanoo kordhineysa xiriirka, gar-gaarka bani’aadanimo, go’aan gaarista iyo wada shaqeynta si hufnaan iyo furfurnaani ay ku jirto.” Ayuu sidoo kale yiri madaxweynaha Soomaaliya.